Magweta eMutori weNhau, Chin'ono, Anozivisa Kuti Haasi Kunzwa Zvakanaka Ari muHusungwa
Nyamavhuvhu 31, 2020
Mutori wenhau, Hopewell Chin'ono pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume, vaine gweta VaDouglas Coltart padare redzimhosva. Chin'ono anonzi haasi kunzwa zvakanaka.
Mutori wenhau ane mukurumbira, Hopewell Chin’ono, uyo ari muhusungwa kujeri repamusorosoro reChikurubi Maximum Security Prison, anonzi haasi kunzwa zvakanaka, izvo zvaita kuti magweta ake amhanyireko kunomuona.
Rimwe remagweta aChin’ono, VaDouglas Coltart veZimbabwe Lawyers for Human Rights, vatenda kuStudio 7 kuti mutori wenhau uyu haasi kunzwa zvakanaka izvo zvaita kuti vashevedze chiremba wake kuti amuone nekukasika.
Panguva yataenda pamhepo VaColtart vanga vasati vatizivisa kuti chiremba ati chii chaizvo chiri kusimbira Chin’ono.
Asi mukuru wesangano remagweta iri, Muzvare Roselyn Hanzi vaudzawo Studio 7 kuti kunyangwe hazvo magweta akaudzwa nachiremba chiri kusimbira Chin'ono, havakwanise kuzivisa veruzhinji zviri kumubata kunze kwekunge iye mbune avapa mvumo yekutaura kuti anoda here kuti ruzhinji ruzive kuti ari kurwara neyi.
Chin’ono, uyo akasungwa mwedzi wapera muna Chikunguru, ari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga, uye achakamirira kutongwa ari muhusungwa.
Chin’ono akasungwa pamwechete nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume uye vese vari kunyimwa mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Mutewedzeri wasachigaro weMDC Alliance, VaJob Sikhala vakasungwawo mwedzi uno vachipomerwa mhosva imwecheteyo, uye vanga vari mudare nhasi kuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo.
Nyaya yavo yanzi iri kuenderera mberi neChipiri ichinzwikwa mudare.
Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services, Superintendent Meya Khanyezi, asi vakamboudza bepanhau reHerald kuti Chin’ono ari kungobatwawo sezvinoitwa vasungwa vose vari mumajeri pasina kutyora kodzero dzavo.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti zvakakosha zvikuru kuti hurumende ipe mukana kuna Chin’ono wekuti amhanyiswe kuchipatara chaanoda kuti aonekwe navanamazvikokota nekukasika.
VaMavhinga vanoti mumajeri emunyika mune mukana wekuti vanhu vanotapurirana zvirwere, vachiti sesangano vagara vari pamberi mukukurudzira kuti vasungwa vanenge vasati vatongwa vachiwanikwa vaine mhosva vaburitswe muhusungwa kuitira kutapudza kutapuriranwa kwezvirwere.